Ewepụtara nkwupụta Glasgow ọhụrụ gbasara omume ihu igwe na njem nlegharị anya
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ịrụ ọrụ » Ewepụtara nkwupụta Glasgow ọhụrụ gbasara omume ihu igwe na njem nlegharị anya
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Ịrụ ọrụ • Sustainability News • Akụkọ na -agbasa ozi Switzerland • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Nkwupụta Glasgow ọhụrụ
Na COP26 Climate Summit n'izu a, njem nlegharị anya na-ekwupụta ọnọdụ mberede ihu igwe, atụmatụ iji kwado omume ihu igwe, ga-ekwupụta na ọ ghọọla mmemme ihu igwe flagship nke Travel Foundation. Tụkwasị na nke ahụ, Travel Foundation ga-ekpughe ọrụ ya pụrụ iche n'inye nkwado na-aga n'ihu maka "Nkwupụta Glasgow na Climate Action na Tourism", na-arụ ọrụ na mmekorita ya na World Tourism Organisation (UNWTO) nke United Nations.
Nkwupụta abụọ ahụ na-etinye Travel Foundation na ụzọ mbụ nke mbọ iji hụ na azụmaahịa njem na ebe ị ga-aga nwere ike decarbonize ngwa ngwa, ime mgbanwe maka mgbanwe ihu igwe, yana ịkwado usoro nrụpụta gburugburu ebe obibi.
Travel Foundation na UNWTO na-achụso mmekorita iji mee ka ebumnuche nke a dị ngwa ngwa.
Ha na-akwalitekwa ebumnuche nke nkwupụta Glasgow n'ogo iji zute ebumnuche ihu igwe zuru ụwa ọnụ.
The mmalite nke nkwupụta Glasgow na COP26 na Nọvemba 4 bụ akara ngosi dị ịrịba ama maka omume ihu igwe na njem nlegharị anya. Ma nkwupụta njem nlegharị anya na Travel Foundation bụ ndị otu kọmitii na-edepụta akwụkwọ maka nkwupụta ahụ - ntinye aka zuru ụwa ọnụ maka otu niile na njem na njem nlegharị anya iji belata ikuku nke ngalaba na ọkara site na 2030, iji kwado atụmatụ mmemme ihu igwe gafee “ụzọ” ise. na ịkọ akụkọ n'ihu ọha banyere ọganihu emere.
A na-akwado òtù niile na njem na njem nlegharị anya kwado Nkwupụta ahụ, na njem nlegharị anya na-ekwupụta 'ọrụ ga-abụ ịkwado maka, na imeziwanye ihe omume ihu igwe na-agba ọsọ na-emesi ike na nha nha ihu igwe na nkwụsi ike, na mkpa nke obodo ndị na-aga.
Site n'iweta nkwupụta njem nlegharị anya n'ime nzukọ ya yana iso UNWTO na-arụ ọrụ iji kwalite atụmatụ nkwupụta Glasgow n'ihu, Travel Foundation na-akwado ọrụ ya dị ka nzukọ na-aga maka mmemme ihu igwe na njem nlegharị anya. Ọ ga-amalite mmemme nke mmemme lekwasịrị anya na mmemme dịka:
Na-ebipụta akụkọ ọganihu kwa afọ maka nkwupụta Glasgow, na-enye nyocha gbasara onye bịanyere aka na nkwupụta ahụ, yana otu ha si aga n'ihu na nkwa ha.
Na-emepe ụzọ na-agbanwe agbanwe, mpaghara mpaghara maka nha carbon na mkpesa.
Nnwale ụzọ ọhụrụ ị ga-esi lụso mgbagwoju anya ọrụ dị n'okpuru "scope 3" (ụkpụrụ bara uru), nke na-emekarị n'ime ebe aga.
Na-eme ka mmekorita na obodo sie ike - dịka ọmụmaatụ site na njem nlegharị anya na-ekwupụta obodo dị n'ịntanetị na netwọk ndị ọrụ afọ ofufo, yana atụmatụ nhazi mpaghara mpaghara.
Iwulite ikike nke ndị bịanyere aka n'akwụkwọ nkwupụta Glasgow, na ịgbakọ ihe ọmụma, ngwa ọrụ na mkpali dị mkpa achọrọ maka mgbanwe mpaghara.
The Travel Foundation ga-edukwa nhazi nke Kọmitii Ndụmọdụ maka Nkwupụta Glasgow nke ga-ezukọ n'ime usoro mmemme njem nlegharị anya nke UN's One Planet Sustainable Tourism iji hụ na ụdị dị iche iche, nha anya, na sayensị ihu igwe nọ n'isi mmalite nke a. A ga-ejikwa usoro mkpesa ihu igwe jikọtara na Nkwupụta Glasgow site na Otu Planet Network.
Jeremy Smith, onye nchoputa nke njem nlegharị anya na-ekwupụta ihe mberede ihu igwe, kwuru: “Nkwuwapụta Glasgow abụghị naanị nkwa - ọ bụ nkwa ime ihe iji belata ihe nfụkasị njem nlegharị anya n'afọ 2030, na ịkọ akụkọ maka ọganihu a na-eme kwa afọ. Ọ dị mkpa ka anyị jiri ezi ọchịchọ na-amalite, ma mgbe ahụ, ịrụsi ọrụ ike na-amalite n'ezie. Ịbụ akụkụ nke Travel Foundation na-enye anyị ohere itinye mgbalị anyị n'ọkwa ọzọ maka mmetụta zuru ụwa ọnụ. "
Jeremy Sampson, onye isi oche nke Travel Foundation, kwuru, sị: "Anyị maara na anyị ga-emekọ ihe ọnụ na ịbawanye elu dịka ọ dịtụbeghị mbụ, na-ejikọta ụzọ 'elu-ala' na 'elu' site n'ịgbasa ihe omume obodo na ịmepụta levers maka mgbanwe n'ofe gọọmentị. na ụlọ ọrụ. Ntugharị njem nlegharị anya gaa na ihu igwe dị mma bụkwa maka mgbanwe njem nlegharị anya n'ozuzu ya, na-atụgharị gaa n'ụdị dabara adaba nke na-edozi mkpa nke ndị bi na ụlọ ọrụ azụmaahịa ma na-ejikwa ma na-ebelata ibu ya na ebe ọ na-aga."
The Travel Foundation and Tourism Declares ga-esonye na mmemme ịntanetị COP26 gọọmentị iji gosipụta mmalite nke Nkwupụta Glasgow, na Tọzdee, Nọvemba 4, na 1400-1600 GMT yana ndị mmekọ VisitScotland, NECSTouR na Ọdịnihu nke Mmekọ Njem Nleta. Ị nwere ike ịdebanye aha iji sonye na sonye na mkparịta ụka ahụ Ebe a.